Ukuvakashela ugu olusempumalanga ye-United States neCanada, ingxenye yokuqala | Izindaba Zokuhamba
INyakatho Melika iyindawo emangalisayo yezindawo zayo zemvelo, kepha uma uthanda umlando wale ngxenye yezwekazi lapho uya khona kufanele kube ugu olusempumalanga. Umlando wase-United States nowaseCanada wenziwe wagudla ugu lolu olusogwini lwe-Atlantic futhi nansi imizi edume kabi.
Iseluleko sami ukuthi uma uya eNew York, hlela uhambo lwakho ukuze ufunde kabanzi nangcono. Ngakho-ke, ungahlela uhambo oluya kwamanye amadolobha afana nalawa IBoston, iWashington DC, iToronto, iMontreal neQuebec. Uzothola amadolobha amahle, amahle futhi anomlando futhi uma ufuna ungazi nezimpophoma ezidumile zaseNiagara.
1 I-East Coast yaseNyakatho Melika
4 I-Washington DC
I-East Coast yaseNyakatho Melika
Ukugxila e-United States naseCanada kumele nakule ndawo kukhona amadolobha amakhulu ala mazwe, okungenani lezo ezigxila emnothweni nakwezombusazwe.
Ogwini lwaseNyakatho Melika eseMpumalanga amakoloni okuqala aseBrithani nawaseFrance ayebhejwa ngakho-ke umlando lapha unamakhulu eminyaka ubudala. Bheka nje ibalazwe ukuze uqonde ukuthi kulula kanjani ukuxhumanisa la madolobha, noma ngabe esemazweni ahlukene. Ngiphakamisa ngqo leyo adventure.
Emhlabeni Abantu bendawo nabavakashi abayizigidi ezingama-50 bavakashela leli dolobha ngonyaka yakhiwa izindawo ezihlukene: iBronx, iBrooklyn, iManhattan, iQueens neStaten Island.
Phakathi kokuhehayo kwayo okuyinhloko Ukwakhiwa Kombuso Wombuso, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini ze I-Broadway, i-Ellis Island, the ICentral Park, iTimes Square y iminyuziyamu eminingi: IMetropolitan of Art, Natural History, kanye neWhitney Museum, iMuseum of Jewish Heritage and Holocaust Memorial noma iNational Museum yeAmerican Indian, ukubala nje ezimbalwa ngoba empeleni ziningi endaweni ngayinye.
Konke kuncike kokuthandayo. Ngingafaka okungaphezulu kokukodwa kokubuka kusukela idolobha lihle ngokubonakala kusuka ekuphakameni okuhle: Phezulu kweThe Rock, Empire State, One World Observatory, mhlawumbe. Ngangidla emgwaqweni bese ngishiya amadola ami ukuze ngiphume ebusuku kahle I-NY inobusuku obumnandi obunemigoqo, izindawo zokudlela kanye namakilabhu.
Uma uhlela ukukhipha ijusi ku-NY bese ubheka ifayili le- Kudlula i-york entsha evula iminyango yezindawo ezingama-80 ezikhangayo futhi ikongela isikhathi nemali futhi ifaka phakathi ukuhamba kwebhasi enezitezi ezimbili ngaphandle kophahla. Kunezinsuku eziyi-1, 2, 3, 5, 7 no-10 futhi kubiza kusuka kuma-dollar angama-109 kuya kwangama-319, yize uma uyithenga online ngalesi sikhathi kunezaphulelo ezimangalisayo.
Ukufika eBoston usuka eNew York unokuhamba okuningi: isitimela, ibhasi, imoto noma indiza. IBoston cishe ngamakhilomitha angama-322 ukusuka e-NY ngakho uhambo alulude. Isitimela siyindlela esheshayo. Isuka ePenn Station eManhattan ifike eSouth Station eBoston. Ulayini we-Acela uthatha amahora amathathu nohhafu kanti ezinye izinkampani zithatha amahora aphakathi kwamahlanu kuya kwamahlanu nohhafu. Uma uvakashela iwebhusayithi ye-Amtrak, ungathenga amathikithi lapho noma mathupha ePenn Station. NgoFebhuwari odlule, amanani asukela ku- $ 67 kuya ku- $ 164 ngesigaba ngasinye.
Ungahamba futhi ngebhasi emahoreni amane futhi imizuzu embalwa, konke kuncike kuthrafikhi. Inkampani yaseGreyhound isuka ePort Authorithy Bus Terminal kepha kukhona neMega Bus neBolt Bus, ngamanani aphansi. Bala ukuthi eGreyhound intengo yethikithi iphakathi kwama-23 nama-37 dollar. Kahle ungahamba ngemoto noma ngendiza. Uma uqasha imoto kufanele nje uye eConnecticut ku-I-84 kuye ku-I-90. Umzila udlula emadolobheni amabili amahle kepha ungazungeza uma ushesha.
Futhi uma ujahe impela, kukhona indiza kepha inqubo ifaka isikhathi sayo. Kungabiza kancane, kepha ukudluliselwa esikhumulweni sezindiza saseNew York kunzima ngoba kukude kakhulu emaphethelweni. Yikuphi ukuheha izivakashi eBoston? Yebo, Kuyidolobha elihle lamakoloni elalingumdlali ophambili we-American Revolution ngakho-ke ivakashelwa kakhulu yizakhamizi zalelo zwe.
Ukuqala Umzila wenkululeko Kuyinto ekhangayo futhi kukusiza ukuthi uxhume amanye amasayithi athandwa kakhulu ngezinyawo. Lo mzila ugijima cishe amakhilomitha amane nengxenye futhi udlula ezikhumbuzweni nasezizeni ezibalulekile eziyi-16. Ungashiyi ekuvakasheni kwakho UFaneuil Hall, indlu yamaHuguenot eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX, imakethe eseduze yekhulu le-XNUMX, i- Ingadi yomphakathi ngama-swans ayo nezikebhe ezincane, indawo ebukekayo yamakholoni yase IBeacon Hill, eHarvard neminyuziyamu yayo yobuciko, ICopley Square, Boston Harbour, i-boardwalk, kanye neminyuziyamu yayo.
Womabili amadolobha angaxhunyaniswa nesitimela, ngu-Amtrak, ngebhasi, ngemoto noma ngendiza. Indlela yokuhamba oyikhethayo izoncika esikhathini sakho, imali yakho nokuthi yini ofuna ukuyibona. Ungathola amathikithi ebhasi asuka ku- $ 48 bese uqeqesha usuka ku- $ 79. Indiza yeJetBlue noma ezinye izindiza nazo ziyizindlela ezingabizi kakhulu futhi kunamabhasi nezitimela ezihamba ngaphansi komhlaba ezisuka esikhumulweni sezindiza ziye enkabeni.
Uma uvakashela leli dolobha entwasahlobo noma ehlobo, khumbula ukuthi kunokuningi kwezokuvakasha futhi kuzoba nabantu abaningi ezindaweni ezikhangayo, ngakho-ke uma usuvele wazi ukuthi yini okufanele uvakashele, ungafuna ukuthenga amathikithi akho kusengaphambili. Yidolobha elinokuningi ukukubona nokukwenza kodwa ngicabanga ukuthi kukhona ukuvakashelwa okungaphunyuki okubili: the White House kanye nePentagon.
Ukuvakashela i-White House kufanele ubhuke amathikithi ngaphambi kwesikhathi, izinyanga. Kuze kube izinyanga eziyisithupha ngaphambili, selokhu isicelo sidlula kwiCongress. Kwabangaphandle kuyadingeka ukuthi uyicubungule ngenxusa laseWashington. Okufanayo kuvakashela iPentagon, kufanele ubhuke kusengaphambili. Ungabhuka amathikithi kusuka ezinsukwini ezingama-90 kuye kwezingu-14 ngaphambi kokuvakasha. Ukuvakasha kunguMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama futhi kumahhala.
Enye inketho yokuzungeza iWashington ukusebenzisa indlela ye- amabhayisikili asesidlangalaleni noma ukuzulazula nge-metro nangebhasi. Amabhayisikili abiza u- $ 7 ngosuku noma u- $ 15 izinsuku ezintathu. Kunezindawo ezingama-300 zokulanda uphinde ubeke ibhayisikili lakho kulo lonke idolobha. Ungajoyina ukuvakasha kwezivakashi noma uthenge indawo yokuvakasha Ikhadi le-DC Go o I-Explorer Pass yezindawo ezintathu noma ezinhlanu ezikhangayo (ama-59 nama-dollar angama-89 ngokulandelana komuntu ngamunye).
Entwasahlobo izimbali ze-cherry ezinikelwe yiJapan ziyintelezi, kepha ungangeza i- Amathuna Kazwelonke ase-Arlington, iNational Mall, iJefferson Memorial, iLincoln Memorial futhi i Isikhumbuzo saseWashington, Alexandria, iHolocaust Museum, iMount Vernon kanye nezindawo ezingomakhelwane iGeogretown noma i-Adams Morgan.
Umuntu ubone iMelika eningi kumabhayisikobho cishe njengokuhamba kwama-movie. Ngenxa yomkhakha wayo onamandla wamasiko, abantu abaningi emhlabeni jikelele bayazazi lezi zindawo futhi bafuna ukuzivakashela, hhayi ngokuzimela kodwa uqobo. Kuze kube manje konke okwanamuhla, kepha sisenayo ingxenye yaseCanada yogu olusempumalanga: iToronto, iMontreal neQuebec.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Ukuvakashela ugu olusempumalanga ye-United States neCanada, ingxenye yokuqala